Torolàlana an-tserasera - Oniversite Hodges - Fandraisana
Sokajy taranja: Torolàlana an-tserasera
Mampiseho 1-9 ny valiny 9
Tongasoa eto amin'ny Hodges University's Online English Grammar Program, rafitra manaraka ny fahatakarana ny fitsipi-pitenenana anglisy avy amin'ny fototra ka hatramin'ny ambaratonga avo lenta. Ny fandaharanay amin'ny Internet dia namboarina manokana ho an'ireo olon-dehibe tsy miteny anglisy mba hahatakatra ny fitsipi-pitenenana sy hiteny amin'ny teny Anglisy matoky. Mahazoa fahaiza-manao ilainao amin'ny anarana, verbe, andalana,…
Mianara teknika marketing mahomby izay mametraka anao mialoha ny fifaninanana.
Misafidiana vato fiakarana lehibe ho an'ny drafitra ho avy, na inona na inona mety ho izy ireo amin'ny mari-pahaizana Fianarana Interdisiplinary.
Famolavolana nomerika sy sary
Ampiasao ny fahaizanao mamorona sy kanto miaraka amin'ny mari-pahaizana momba ny Digital Design and Graphics.
Mahazoa fiofanana mandresy loka ho an'ny kariera Paralegal sy ara-dalàna.
Siansa momba ny informatika vs informatika momba ny informatika
Mandrosoa ny ho avy amin'ny haitao miaraka amin'ny mari-pahaizana momba ny informatika mandroso
Ny diplaoman'ny psikolojia azo ampiharina malefaka dia tsara ho an'ny asa rehetra.
Miasa amin'ny tontolo feno olona manana mari-pahaizana momba ny kaonty.
Topimaso momba ny fandaharam-pianarana an-tserasera
Fandaharam-pianarana ambony an-tserasera an-tserasera